၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ထုတ်ခဲ့ဖူးသောအကြီးဆုံး LEGO အတွဲများ
07 / 10 / 2021 07 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 384 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, ၁၀၂၇၆ Colosseum, ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, art, Creator Expert, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, LEGO Art, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ninjago, Lego Star Wars, Ninjago, Star Wars
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏ပထမဆုံးအကြီးမားဆုံးသောအတွဲများအတွက်နယ်နိမိတ်ကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးနေပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၌လိုအပ်သောစာရင်းသို့ Titanic update ကိုထပ်မံဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
ထုတ်ဖော်ပြသမှုနှင့်အတူ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်ငါတို့ရဲ့အကြီးဆုံးစာရင်းကို update လုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီ Lego အခင်းအကျင်းတွင်နောက်ဆုံး set ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြန့်ချိခဲ့သောအစုံသည်၎င်း၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်အပိုင်းအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ၎င်းကိုထိပ်ဆုံးနေရာများသို့အလွယ်တကူချနိုင်သည်။
စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာနှင့်မှော်အတတ်မှသည်artအိုင်လ် artသမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ဤတွင်အကြီးဆုံးခုနစ်ခုရှိသည် Lego အပိုင်းအရေအတွက်အစဉ်လိုက်အတိုင်းအချိန်တိုင်း၏ပုံစံများ။
7 - NINJAGO 71741 NINJAGO City ဥယျာဉ်
သတ္တမအကြီးဆုံးအဖြစ် Lego အုတ်ပေါင်း ၅,၆၈၅ ဖြင့်အချိန်အားလုံးကို ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ၁၀ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် multi-storey modular model ကိုမိတ်ဆက်သည် Lego Ninjago စတိုင်။
၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ် Ninjago minifigures အမျိုးမျိုးနှင့်အခြားတစ်ခုပြီးမြောက်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောတည်ဆောက်မှုတို့ပါ ၀ င်သောအစဉ်အမြဲထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မည် Ninjago City ဖန်တီးမှုများ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အတွင်း၌ဝှက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များကိုပိုမိုရှာဖွေရန်
6 - Creator Expert ၁၀၁၈၉ Taj Mahal
နဂါးများ၊ ဒြပ်ပါဝါများနှင့်ကောင်းကင်ယံမှပြန့်ကျဲနေသောရှုခင်းများမှကမ္ဘာသို့ရွေ့လျားခြင်း၊ စာရင်း၌နောက်ထပ်အကြီးမားဆုံးတည်ဆောက်မှုသည်လက်တွေ့အားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသောမြေတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို့ဆောင်သည်။ ၁၀၁၈၉ Taj Mahal အိန္ဒိယ၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာကိုပြန်လည်ဖန်တီးသည်။
မူလအားဖြင့် 10189 Taj Mahal အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်၊ ဤပုံစံသည်အဓိက၌ရှိနေခဲ့သည် Lego ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်အငြိမ်းစားမယူမီအုပ်စု၏စာရင်းအင်းများ။ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်နေနိုင်သည် ၁၀၁၈၉ Taj Mahalပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းကို ၅,၉၂၃ ဒြပ်စင်ပါတဲ့ကြီးမားတဲ့ set အဖြစ်အမြဲအမှတ်ရလိမ့်မယ်။
5 - ဟယ်ရီပေါ်တာ 71043 Hogwarts ရဲတိုက်
၏ Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား ဟယ်ရီပေါ်တာ franchise ကိုအခြေခံသောနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်များ၊ စာအုပ်များနှင့်အခြားမီဒီယာများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာများနှင့်ပြည့်နေသည်။ ထို့ကြောင့် Hogw ၏ကြီးမားသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သည်arts Castle, စုန်းအတတ်နှင့်မှော်ပညာကျောင်း၏အိမ်သည်မလွဲမသွေဖြစ်သည်။
အပိုင်း ၆,၀၂၀ နှင့်အတူရဲတိုက်အပန်းဖြေမှုကိုရုပ်ရှင်များမှမြင်ကွင်းများကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်သီးသန့် minifigures လေးခုနှင့်ပုံစံငယ်များစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
4 - Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon
မှော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှအဝေးတစ်နေရာ၊ နောက်ထပ်အကြီးဆုံးနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုသို့ Lego set သည်အစဉ်အမြဲတိုးချဲ့နေသည် Star Wars ခေါင်းစဉ် 75192 ထောင်စုနှစ် Falconမရ။ 10189 Taj Mahal ကဲ့သို့ပင်ဤအစုကိုထပ်တူပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း p ၏အစုစုအသစ်ကိုသုံးသောမွမ်းမံထားသောဒီဇိုင်းဖြင့်arts.
franchise ၏မူရင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲသုံးခုစလုံးအတွက် minifigures များပါ ၀ င်သည်။ Lego Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင် ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည် ခဏအနားယူမည်မဟုတ်.
3 - လူကြီးများအတွက် LEGO 10276 Colosseum
အကြီးဆုံးအဖြစ်နန်းချခံရသည် Lego ဖြန့်ချိပြီးနောက် ၂၀၂၁ တွင်အစဉ်အမြဲထုတ်ဝေခဲ့သည် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၇၆ Colosseum အုတ် ၉,၀၃၆ လုံးပါ ၀ င်သော်လည်းယခုတတိယအကြီးဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။
လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၇၆ Colosseum ရောမမြို့ရှိအထင်ကရပွဲကြည့်စင်၏သမိုင်းဝင်အလှကိုဖမ်းယူရန်ရည်စူးလျက်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် miniature gladiatorial combat ၏ခြိမ်းခြောက်မှုမပါဘဲ၎င်းကိုသင်လမ်းညွှန်ရန်
၂ - လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်
မကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်ဒီဇိုင်းများအရဒုတိယအကြီးဆုံးတည်ဆောက်မှုအဖြစ်သရဖူဆောင်းထားသည်။ လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် အစဉ်အဆက်အကြီးဆုံး အပိုင်းအရေအတွက်မှလွဲ။ စုစုပေါင်းအုတ် ၉,၀၉၀ မှာ ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခရီးမတိုင်မီမူလရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအင်ဂျင်နီယာသင်္ကေတ၏အလှကိုပြန်လည်ရယူပါ။
လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတိကျသေချာစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် Lego ဒီဇိုင်းဆရာကြီးတ့ Mike Psiaki ကနဦးအစီရင်ခံစာ၎င်းကိုတည်ဆောက်မှုတစ်လျှောက်တွင်အသေးစိတ်တည်ဆောက်ထားသောအတွင်းပိုင်းတစ်ခုနှင့်၎င်းကိုတစ်လျှောက်တွင်မြင်နိုင်သည် အပိုင်းများခွဲထုတ် မော်ဒယ်၏။
1 - Art 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ
စာရင်းကိုရှာကြည့်သည် Lego Art 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံအပိုင်းအစများနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်အားလုံး၏အကြီးမားဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မဖြုတ်ချရသေးသောပုံစံဖြစ်သည်။
အလေးချိန်အားဖြင့်အုတ်ပေါင်း ၁၁,၆၉၅ ရှိသည် Lego Art အပိုင်းများပါ ၀ င်လာသောအခါကျန်အပိုင်းများအပေါ်တွင်တာဝါတိုင်များတပ်ဆင်ပါ၊ အများစုမှာစတစ်ကြွပ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုအသုံးပြုသောအခင်းအကျင်းဒီဇိုင်းများကိုကျေးဇူးတင်သည်။ ဖတ်နိုင်ပါတယ် Brick Fanatics'' ပြန်လည်သုံးသပ် အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ - ယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com.
← အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၂၉၄ Titanic အတွက် LEGO ကိုပထမဆုံးကြည့်ပါ
LEGO for Adults 10294 Titanic သည် LEGO ဒီဇိုင်နာဟောင်းတစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည် →